Etu esi emeri akwụkwọ ikike Cannabis - Ndị na-adụ Canna maka akwụkwọ mmeri
Otu esi emeri akwụkwọ ikike Cannabis ya na ndị ndụmọdụ Canna
Kedu otu m ga-esi merie akwụkwọ ikike cannabis?
Ọ bụ oge ngwa na Illinois na asọmpi dị egwu! Na-eji naanị ikikere iri asaa na ise iji nye onyinye, ihe niile dị na ntinye aka. Fortinye akwụkwọ ikike maka ọfụma na-efu nnukwu ego, na-asọ mpi ma n'ọtụtụ oge, ohere dị otu oge. N'izu a Miggy na Tom bụ ndị ọkachamara Jay Czarkowski sonyere, Onye hiwere Partner na Ndị ndụmọdụ Canna, iji kọwaa ihe ọ chọrọ iji nweta ihe ịga nke ọma. Ndị ndụmọdụ Canna nwere akụkọ ntolite dị ịtụnanya maka imepụta ndị ahịa iji nweta mmeri. Mụta ihe na-eme maka ngwa mmeri n'izu a:
Gịnị bụ ndị ndụmọdụ Canna?
Agencylọ ọrụ na-ahụ maka azụmaahịa na-ahụ maka ịzụlite akara na ngwa ikikere
Enweela ngwa na steeti 29 yana Guam, Puerto Rico, na Canada
Diane na Jay Czarkowski tọrọ ntọala na 2013
Ratingrụ ọrụ na Boulder, Colorado
Kedụ ọrụ ndị Canna Advisors nyere?
Uto & Njikarịcha
ụzọ ọpụpụ Strategy
Ndị na-eme Ọgwụ
Ihe kpatara O ji d ị mkpa Onye na-eme ndụmọdụ
Ngwa dị oke ọnụ, akwụkwọ maka inyefe ihe nwere ike ịnọ na iri puku kwuru iri puku
Odida obodo a di egwu di egwu
Ngwa dị mgbagwoju anya
Ndị ndụmọdụ dịka ndị na-ahụ maka Canna nwere ahụmịhe na ahụmịhe
Nmalite nzọụkwụ gị iji mee ka ohere gị nke inweta ikikere
Malite n'isi ụtụtụ!
Nweta aku na uba dicha nma
Mezuo ọrụ ndị ọrụ dị mkpa
Nwee usoro ego iji sie ike na ego ị nwetara
Inwe otu ndi raara nye mmezu nke azụmahịa na ngwa nke gi nwere ike iwelite ohere i ji merie ngwa. Ngwa dị ọnụ, sie ike, ma nweekwa ọkaibe. Otu ndi eweputara ha n’itinye azụmahịa gi cannabis maka oganihu gha agha ime ihe di egwu.
Ndị ndụmọdụ Canna